ဒီထဲမှာ သင်ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်က သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းပါပဲ – Trend.com.mm
ဒီထဲမှာ သင်ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်က သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းပါပဲ
သင်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေ သင့်မှာ အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရဲ့လား? ကိုယ်တွေအားလုံးမှာ အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကအမြဲရှိနေတာမို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်ချက် ထားပါ။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ပါလို့အမြဲတမ်းပြောနေရတာပါပဲ။ဒါဖြင့် သင့်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအရာ ကဘာများလဲ?ဘာလဲဆိုတာ ဒီပုံထဲမှာ ပထမဆုံးသင်မြင်တွေ့ရတဲ့ ပုံရိပ်ကပြောပြနေပါလိမ့် မယ်တဲ့။ဒီပုံထဲမှာသင်ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံရိပ်က…
တကယ်လို့များသင်ကမုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့လူကို အရင်ဆုံးမြင်တွေ့တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရာက ဇွဲမလျှော့ပဲကြိုးစားတာပါတဲ့။ဘယ်လောက်ပဲ သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေများများသင်ကနောက်ပြန်လှည့်လေ့မရှိပဲမရမနေဇွဲမလျှော့ပဲကြိုးစားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခြားသူတွေက သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်မရောက်မချင်း အသိအမှတ် ပြုလေ့မရှိရင်တောင် သူတို့ကိုဂရုမစိုက်ပဲ သေချာအစီအစဉ်ချပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုက သင်နဲ့လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာပါပဲ။
သင်က ပထမဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရာ ကတော့ စိတ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားတာပါတဲ့။အနုပညာရှင်ကိုမြင်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့်ရဲ့ စိတ်ဟာလည်း အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်လိုမျိုးစိတ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်အောင်မြင်မှုတွေရမှာပါ။ တစ်ခြားသူတွေကလည်း သင်နဲ့ အတူအချိန်ကုန်ဆုံးရတာကိုသဘောကျပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့အတူ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲကို ရောက်နိုင်လို့ပါ။ဥပမာ သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးသားထား တဲ့စာအုပ်က တစ်ခြားသူတွေကိုစိတ်ကူးကမ္ဘာထဲမျောသွားစေနိုင်တဲ့သဘောပါပဲ။
သင်ကမျက်နှာဖုံးပုံစံကို ပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင်က စကားပြောကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါတဲ့။ အာဝဇ္ဇန်းရွှင်တယ်ပေါ့။သင့်ဘေးနားကလူတွေသင့်ပြောစကားမှာမျောသွား လောက်အောင်စကားပြောလိမ္မာပါးနပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အတွေးအခေါ်လည်းကောင်းတယ်။စကားပြောလည်းကောင်းပြီးဘယ်စကားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာထည့်သုံးသင့်တယ်ဆိုတာသိထားသူတစ်ယောက်ပါ။သင့်ရဲ့စကားပြောကောင်းတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။
တကယ်လို့များ သင်လူအုပ်ကြီးကို ပထမဆုံးမြင်လိုက်တာဆိုရင် သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရာ ကတော့ စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွတာပါတဲ့။အထူးသဖြင့် တစ်ခြားသူတွေနဲ့ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုး မှာပေါ့။သူများတွေလို တွန့်ဆုတ်နေတာမျိုးမရှိပဲ လူစိမ်းတွေနဲ့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှုတ်ဆက်တဲ့စတိုင်လ်မျိုးပါ။သင်က ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းနဲ့သိရတာ ကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘ၀ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းတတ်သူ
ဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့ အပြုံးနဲ့တစ်ခြားသူတွေကိုလည်းပျော်ရွှင်စေတဲ့သူမျိုးပါတဲ့။ သင့်ကိုလည်း လူတိုင်းကချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရှိနေလို့ ကမ္ဘာကြီးကိုအကောင်းမြင်စိတ်တွေနဲ့ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။သင့်ဘ၀၊သင့်အကြောင်းက ဘယ်လောက်ပဲဆိုးဆိုး ဒီကမ္ဘာကြီးက
သင်ရှိနေတဲ့အတွက် ပိုပြီးလှပကောင်းမွန်နေတာပါ …Love yourself ! 😍
သငျဘယျလိုလူမြိုးပဲဖွဈနပေါစေ သငျ့မှာ အကောငျးဆုံးအရာတဈခုရှိနတေယျဆိုတာ သိရဲ့လား? ကိုယျတှအေားလုံးမှာ အကောငျးဆုံးအရာတဈခုကအမွဲရှိနတောမို့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျ ယုံကွညျခကျြ ထားပါ။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျခဈြပါလို့အမွဲတမျးပွောနရေတာပါပဲ။ဒါဖွငျ့ သငျ့မှာရှိတဲ့အကောငျးဆုံးအရာ ကဘာမြားလဲ?ဘာလဲဆိုတာ ဒီပုံထဲမှာ ပထမဆုံးသငျမွငျတှရေ့တဲ့ ပုံရိပျကပွောပွနပေါလိမျ့ မယျတဲ့။ဒီပုံထဲမှာသငျပထမဆုံးမွငျလိုကျရတဲ့ပုံရိပျက…
တကယျလို့မြားသငျကမုတျဆိတျမှေးနဲ့လူကို အရငျဆုံးမွငျတှတေ့ယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးအရာက ဇှဲမလြှော့ပဲကွိုးစားတာပါတဲ့။ဘယျလောကျပဲ သငျ့ရဲ့ ပနျးတိုငျရောကျဖို့ အခကျအခဲတှမြေားမြားသငျကနောကျပွနျလှညျ့လမေ့ရှိပဲမရမနဇှေဲမလြှော့ပဲကွိုးစားသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။တဈခွားသူတှကေ သငျ့ရဲ့ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျမရောကျမခငျြး အသိအမှတျ ပွုလမေ့ရှိရငျတောငျ သူတို့ကိုဂရုမစိုကျပဲ သခြောအစီအစဉျခပြွီးဆောငျရှကျမယျဆိုရငျ အောငျမွငျမှုက သငျနဲ့လကျတဈကမျးအကှာမှာပါပဲ။
သငျက ပထမဆုံးအနုပညာရှငျတဈယောကျကိုမွငျလိုကျတယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးအရာ ကတော့ စိတျကူးနိုငျစှမျးမွငျ့မားတာပါတဲ့။အနုပညာရှငျကိုမွငျတာဖွဈတဲ့ အတှကျ သငျ့ရဲ့ စိတျဟာလညျး အနုပညာရှငျတှရေဲ့ အတှေးအချေါလိုမြိုးစိတျကူးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ အနုပညာနဲ့ ပတျသကျပွီးကွိုးစားရငျကွိုးစားသလောကျအောငျမွငျမှုတှရေမှာပါ။ တဈခွားသူတှကေလညျး သငျနဲ့ အတူအခြိနျကုနျဆုံးရတာကိုသဘောကပြါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သငျနဲ့အတူ သငျ့ရဲ့စိတျကူးယဉျကမ်ဘာထဲကို ရောကျနိုငျလို့ပါ။ဥပမာ သငျ့ရဲ့ စိတျကူးကောငျးကောငျးနဲ့ ရေးသားထား တဲ့စာအုပျက တဈခွားသူတှကေိုစိတျကူးကမ်ဘာထဲမြောသှားစနေိုငျတဲ့သဘောပါပဲ။
သငျကမကျြနှာဖုံးပုံစံကို ပထမဆုံးမွငျတှခေဲ့တယျဆိုရငျတော့ သငျက စကားပွောကောငျးသူ တဈယောကျပါတဲ့။ အာဝဇ်ဇနျးရှငျတယျပေါ့။သငျ့ဘေးနားကလူတှသေငျ့ပွောစကားမှာမြောသှား လောကျအောငျစကားပွောလိမ်မာပါးနပျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။အတှေးအချေါလညျးကောငျးတယျ။စကားပွောလညျးကောငျးပွီးဘယျစကားလုံးကိုဘယျနရောမှာထညျ့သုံးသငျ့တယျဆိုတာသိထားသူတဈယောကျပါ။သငျ့ရဲ့စကားပွောကောငျးတာကိုမှနျမှနျကနျကနျသုံးတတျဖို့တော့လိုတယျနျော။
တကယျလို့မြား သငျလူအုပျကွီးကို ပထမဆုံးမွငျလိုကျတာဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးအရာ ကတော့ စိတျအားထကျသနျတကျကွှတာပါတဲ့။အထူးသဖွငျ့ တဈခွားသူတှနေဲ့ပွောဆို ဆကျဆံတဲ့အခါမြိုး မှာပေါ့။သူမြားတှလေို တှနျ့ဆုတျနတောမြိုးမရှိပဲ လူစိမျးတှနေဲ့လညျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှုတျဆကျတဲ့စတိုငျလျမြိုးပါ။သငျက ဒီကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့လူတိုငျးနဲ့သိရတာ ကောငျးတယျလို့ယုံကွညျထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။ဘဝကိုပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးတတျသူ
ဖွဈပွီးသငျ့ရဲ့ အပွုံးနဲ့တဈခွားသူတှကေိုလညျးပြျောရှငျစတေဲ့သူမြိုးပါတဲ့။ သငျ့ကိုလညျး လူတိုငျးကခဈြခငျနှဈသကျကွတဲ့ ဆကျဆံရေးမြိုးပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈပါတယျ။
သငျ့မှာဒီလိုကောငျးမှနျတဲ့အရာတှရှေိနလေို့ ကမ်ဘာကွီးကိုအကောငျးမွငျစိတျတှနေဲ့ကွညျ့ဖို့ မမပေ့ါနဲ့။သငျ့ဘဝ၊သငျ့အကွောငျးက ဘယျလောကျပဲဆိုးဆိုး ဒီကမ်ဘာကွီးက
သငျရှိနတေဲ့အတှကျ ပိုပွီးလှပကောငျးမှနျနတောပါ …Love yourself ! 😍
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Assassination Nation
မတ်မတ် Yoona ရဲ့ အဆူခံလိုက်ရတဲ့ မောင်လေး Park Bo Gum 😂